Zumba ukulahlekelwa isisindo
Ukufaneleka Izinhlelo zokuqeqesha
Umdlalo weZumba uyisiqondiso semfashini sokuzikhandla, esivele sithandwa kakhulu kamuva. Ngesikhathi esifanayo, abantu abangafika ku-50 bangaba khona ekuqeqeshweni, bahlelwe ebhodini lokuhlola phambi kwesibuko esikhulu. Ngaphansi komculo oshisayo, umqeqeshi omi ngaphambili, ubonisa ukunyakaza, okuyisisekelo saso okuyizingoma zomdanso waseLatin American, njenge-meringue noma i-salsa. I-Zumba inkulu ngokulahlekelwa isisindo, ngoba ngesikhathi esisodwa ungashisa ama-calorie angu-600.
Izinzuzo nokuphikisana no-zumba
Lokhu kuqeqeshwa komzimba kunamaphuzu amaningi amahle:
Ngesikhathi sokudansa, wonke amaqembu omzimba ahilelekile, ikakhulukazi aphansi. Ngemuva kwezifundo ezimbalwa uzozizwa ukuthi imisipha iqala ukuqinisa futhi umzimba uqala ukuqina. UZumba uphinde usize ukulwa nenkinga ehlonishwa kakhulu yabesifazane - cellulite.
Ngemuva kokuqeqeshwa okujulile komdanso, imisipha kanye nemikhumbi ihamba ngokweqile, futhi umzimba wonke ugcwele umoya-mpilo, ngenxa yokuphefumula okusheshayo ngemva kwamakilasi.
Okuthinta kahle i-zumba nokuhlelwa kwesikhashana, kwanda ukwandisa, kuthuthukisa ukuguquguquka kwemvelo kanye ne-plasticity.
Ngaphezu kokuthi lo mdanso usiza ukugcina yonke imisipha ikhula futhi ikhuthaza ukulahlekelwa isisindo, iphinda ithuthukise ukugaya, isusa ubunzima esiswini futhi ivuse umsebenzi wezitho zomzimba. Futhi i-zumba iyisimo esihle sokuzivocavoca esiswini senhliziyo.
Okunye okunye okunye okunjalo kokuzijabulisa komdanso kuyithuba lokukhululeka kokubili ngokomzimba nangokwengqondo.
Naphezu kwenzuzo ebalulekile evela emsebenzini we-zumbu, kunezingqinamba lapho ukuqeqeshwa okunjalo kungavunyelwe khona, kungukuthi:
umfutho wegazi ophakeme njalo;
izifo zesimiso se-musculoskeletal.
Ukuzivocavoca kukaZumba ukulahlekelwa isisindo
Inhloso eyinhloko ye-zumba, yebo, isisindo somzimba, futhi ukuze wenze umphumela ophawulekayo, udinga ukucabangela amanye amaphuzu:
Ukuzibandakanya e-zumba ku-izingubo ezikhululekile futhi ezikhululekile, ezingeke zivimbele ukunyakaza.
Ukuqeqesha kufanele kubanjwe okungenani kathathu ngesonto imizuzu engama-30 kuya kwangu-60.
Phakathi namakilasi, uphuze amanzi ukuvimbela ukuphelelwa amandla kwamanzi.
Ungalisebenzisi esiswini esingenalutho, umzimba awukwazi ukumelana nomthwalo.
Yiqiniso, labo abathintekayo noma bazokwenza zumba, banesithakazelo ukuthi mangaki amakhilogremu ashiswa ngesikhathi esisodwa. Ayikho idatha eqondile, ngoba lesi sibalo sincike esikhathini sokuqeqesha, ngokuqina, ekulungiseleleni ngokomzimba umuntu, ngesisindo sakhe. Ngokwesilinganiso, ihora elikhiqizayo lokuqeqeshwa, ungashisa kusuka kuma-calories angu-500 kuya kwangu-700.
Ukuzivocavoca ngamantombazane ekhaya
Ingabe ukusiza ukulahlekelwa isisindo?
Ukushaja ngeLeysan Utiasheva
I-Gillian Michaels: I-Metabolism
I-ballet yomzimba yabaqalayo
UDkt Luke akazange akhulume uKesha esivumelwaneni: Ama-Sony Amazwana abonisa ukuxabana
Ichibi Como, e-Italy
Usuku lukaSt. Sophia
I-Lacunar angina - ukwelashwa kubantu abadala ngokusebenzisa izindlela eziphumelelayo kakhulu
I-Leopard Fur Coat
I-Vitamin C ekudleni
Amapaki ama-semi-season season
Ukuhlukaniswa komkhuba kokuhlanganyela kwehlombe
Ikhekhe elihlobisa nge-mastic
Ungalungisa kanjani ikati ukuze inzalo?
I-bakedet ekamelweni lokulala
I-hepatomegaly - iyini, nokuthi ingasindisa kanjani isibindi?
Amaconsi e-Vasodilating ekhaleni